वसन्त आएको छ - यो वजन कम गर्ने समय हो | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
प्रकाशित 04.02.2020 04.02.2020
वसन्त आएको छ - यो वजन कम गर्ने समय हो
यो चाखलाग्दो छ कि सामान्यतया महिलाको वसन्त (तुमा (र धेरै पुरुषहरू) सम्झनुहोस् कि तपाईंले वजन कम गर्नुपर्दछ! यो इच्छा बढ्दो सक्रिय रूपमा चम्किरहेको सूर्यसँग सम्बन्धित छ, जाडोको वार्डरोबलाई सजिलो भएकोमा परिवर्तन गर्‍यो, र पौडीने मौसमको सम्भावना झन झन् नजिक हुँदै गइरहेको छ। संक्षेप मा, मान्छे को वसन्त मा अक्सर वजन कम गर्न को एक वास्तविक इच्छा लाई अँगालेको छ। खैर, यो कभर भएकोले, हामी यसको विरोध गर्दैनौं। यसको लागि के आवश्यक छ?
तौल घटाउन वसन्त परिवर्तन चार "व्हेल"
सर्वप्रथम, द्रुत तौल घटाउने बारेमा सबै जानकारी तुरुन्तै हटाउनुहोस् "सजिलो र सजिलो - प्रति हप्ता माइनस सात किलोग्राम" को शैलीमा। यो स्पष्ट छ कि किलोग्राम सजिलै गिराइएको थियो, केवल विनीत फर्काएझैं, यसलाई बुझ्नका लागि पोषण विशेषज्ञ हुनुपर्दैन।
दोस्रो, वजन कम गर्न को लागी इच्छाशक्ति र आत्म-अनुशासन देखाउन आवश्यक हुनेछ भन्ने तथ्यका लागि तयार हुनुहोस्। यो अत्यन्तै बोरिंग लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यस्तो छ - वजन घटाउनमा केहि गम्भीर नतिजा प्राप्त गर्न, तपाईं मात्र यो उपलब्धि बारे सचेत हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, हामी वसन्त weightतुमा वजन कम गर्न सचेत दृष्टिकोण अपनाउँदैछौं। किनकि हामीले निर्णय गरेका छौं - हामी यसलाई अस्वीकार गर्नेछौं!
तेस्रो, यो स्पष्ट रूपमा बुझ्न कि वजन कम गर्न को लागी आहार उपाय मात्र पर्याप्त छैन भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। सम्भाव्य शारीरिक गतिविधि समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्। जोग (विशेष जुत्ता आवाश्यक हुन्छ!), आफैंमा उत्साहपूर्वक हिड्नुहोस् र नर्डिक वाकि forको लागि लाठीसहित, पोखरीको लागि साइन अप गर्नुहोस्, योग, पाइलेट्स, र केवल डम्बेलहरू खरीद गर्नुहोस्, अन्तमा!
चौथा, पोषण विज्ञलाई भेट्न खुसी लाग्नेछ। तर जबकि यो मेडिकल विशेषता सबैभन्दा सामान्य छैन, र यसले धेरै पैसा खर्च गर्न सक्दछ, तपाईंले आफैले मूल्या to्कन गर्नुपर्नेछ कि कुन उत्पादनहरू तपाईंले पाउन्ड थप्नुहुन्छ, कुन वजनबाट ग्यारेन्टी गरिएको छ। अवश्य पनि, चिनी र स्टार्चको साथ यो बुझिन्छ, तर त्यहाँ केहि मानिसहरू छन् जसले अन्नकाराहरूमा तौल घटाउँछन्, र त्यहाँ केही मानिसहरू छन् जसले मासुमा वजन घटाउँछन्।
यस क्षेत्रमा तपाईंको अनुभवको विश्लेषण गर्नुहोस् र तपाईंको आहारमा कम्तिमा अर्को तीन महिनाको लागि सोच्नुहोस्। डाइट मेनू सिर्जना गरेर यसलाई टाढा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
थप रूपमा, त्यहाँ केहि ट्रिकहरू छन् जुन तपाईंको पाउण्डमा थप पाउन्डहरू हटाउँन मद्दत गर्दछ।
चाल एउटा उपाध्यक्ष होइन, तर तौल घटाउने एक साधन हो
मीठो धेरै व्यक्ति जो वजन घटाई र वजन राख्छन् भन्छन्: यदि तपाईंसँग दिउँसो १२ भन्दा पहिले मिठाई छ भने, यसले चित्रलाई हानी गर्दैन। डाक्टरहरूले यसको लागि केहि व्याख्या फेला पारेका छन्। यदि तपाई चिनी बिना गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसो भए मिठो खपत गर्ने यो तरिका किन प्रयोग नगर्ने?
मिठाईहरू जुन तपाईं वजन घटाउनको साथ खान सक्नुहुन्छ
नमस्ते। यसलाई आहारबाट निकाल्नुहोस्। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो यस्तो डरलाग्दो जस्तो छैन जस्तो देखिन्छ, किनभने सबै उत्पादनहरूमा विभिन्न संयोजनहरूमा सोडियम क्लोरीन हुन्छ, केहि धेरै धेरै। उदाहरण को लागी, सोया सॉस धेरै नुन सहितको उत्पादन हो, यसलाई मसाला (तरकारी तेलको साथ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने) तरकारीको सलाद, तपाईं एक महान स्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। खैर, खाना थप्न छाड्दा, तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कति उत्पादनहरू वास्तवमा नुनिलो छन्। उदाहरणका लागि, अण्डाको जर्दी नै नुन हो, के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? एक सानो छ, तर तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ!
सूप्स खानामा तरकारी सूपको समावेश पाचनका लागि राम्रो छ, तर धेरैको तर्क छ कि अजवाइनको अनिवार्य घटकको साथ सूपको खानाले तौल घटाउन योगदान गर्दछ। मार्लेन डाइट्रिच, जो एक हलिउड डिवा मात्र थिइनन्, तर एक अद्भुत परिचारिका पनि थिइन। पढ्नुहोस् स्लिमिंग सूप व्यंजनहरु। यो प्रयास गर्न तयार हुनुहुन्छ?
स्वादिष्ट र स्वस्थ स्लिमि sou सूपहरू
मनोविज्ञान पक्कै पनि हामीहरू सबैलाई "आफैंलाई सँगै तान्ने" अभिव्यक्ति थाहा छ। यो बाहिर जान्छ कि तपाईं यो आफ्नो लागि एकदम वास्तविक गर्न सक्नुहुन्छ - र यसले आफैलाई उत्पादनमूलक वजन घटाउन वसन्तमा सेट अप गर्न मद्दत गर्दछ।
मानौं तपाईं साँच्चिकै खान चाहानुहुन्छ, तर मात्र होइन, तर केहि जुन तपाईंको आहारमा हुँदैन। केवल तपाईको मुट्ठीलाई कडा टाँस्नुहोस्, र ... यो धेरै अनौंठो छ, तर यसले तपाईंलाई वजन कम गर्नमा तपाईंको मार्गमा जारी राख्न दृढ रहन मद्दत गर्दछ।
र अझै ... हामीले पहिले नै केही चाहनाहरूको दृश्यको बारेमा धेरै जान्दछौं। किन आफ्नो सपना को आकृति कल्पना छैन?
ठीक छ, तपाइँ वसन्तमा वजन कम गर्न तयार हुनुहुन्छ?
के तपाइँ वसन्तमा वजन घटाउन तयार हुनुहुन्छ?
प्रति दिन कति कैलोरी खाईन्छ तपाईलाई वजन कम गर्न?
सक्रिय कार्बनको साथ कसले तौल घटाउने कोसिस गरे?
After 45 पछि वजन कम गर्न थालेका महिलाहरू। राम्रो सल्लाह दिनुहोस्।
के यो पनीर मा वजन कम गर्न सम्भव छ?
पोस्ट वजन सुधार
54 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,348 प्रश्नहरू।